.လေယာဉ်ပျက်ကျတော့မယ့် အချိန်မှာ တန်ခိုးပြ ကာကွယ်ပေးခဲ့သော တောင်ပုလုဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကမ္ဘာကျော် ဖြစ်ရပ် – Askstyle
.လေယာဉ်ပျက်ကျတော့မယ့် အချိန်မှာ တန်ခိုးပြ ကာကွယ်ပေးခဲ့သော တောင်ပုလုဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကမ္ဘာကျော် ဖြစ်ရပ်
လွန်​ခဲ့တဲ့ ၃၈ နှစ်​​လောက်​ကထူးခြားဖြစ်​စဉ်​တခုပါ. . . ဘာသာရေးနှင့်ဆက်နွယ်သော အထွေထွေ ဗဟုသုတ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိတ္ထီလာမြို့အနီးရှိ တောင်ပုလုတောရရိပ်သာတွင် သီတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့သော တောင်ပုလုဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် တစ်ချိန်က ရဟန္တာဟုထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့သည်။
ရတနာသုံးပါးကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်လာသူတစ်ယောက်အကြောင်းအပါအ၀င်စာအုပ်ပေါင်းများစွာကိုရေးခဲ့သူစာရေးဆရာဒါရိုက်တာဦးဆန်းလွင်သည် တောင်ပုလုဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအကြောင်းပြု၍ ဗုဒ္ဓ
ဘာသာသို့ကူးပြောင်းကာ အရှင်အာဒိစ္စရံသီ ဘွဲ့အမည်ဖြင့်ရဟန်းဝတ်ပြီး မြန်မာပြည်အနှံတရားများ လှည့်လည်ဟောခဲ့ပါသည်။ ပျဉ်းမနားမဟာမြိုင်ဆရာတော်ဦးဇောတိကသည်လည်း ဆရာတော်ကြီးကိုအကြောင်းပြု၍ ဘာသာကူးပြောင်းကာရဟန်းဝတ်ပြီး စာအုပ်ပေါင်းများစွာရေး၍ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးကို လှည့်လည်တရားဟောခဲ့ပါသည်။
1970 ခုနှစ်ကျော်ဝန်းကျင်လောက်ကအမေရိကန်ကို ပျံသန်းတဲ့လေယာဉ်တစ်စီးဟာကောင်းကင်ယံမှ ပျက်ကျလုဆဲဆဲ ဖြစ်ခဲ့တယ် ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာဘဲ လေယာဉ်မူးနှစ်ဦးဟာ လေယာဉ်ဦးခေါင်းရှေ့တည့်တည့်မှာ
သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ရဟန်းတော်တစ်ပါးကိုမြင်လိုက်ရပြီး လေယာဉ်ပျံဟာ ရုတ်တရက်ပြန်လည်ကောင်းသွားပြီး အမေရိကန်ကို ချောမောစွာပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီသတင်းကိုအမေရိကန်သတင်းစာမှာ ဟိုးလေးတစ်ကျော်ဖြစ်ခဲ့ပြီး မြန်မာရဟန်းတော်တစ်ပါးက လေယာဉ်ကိုကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းအကျယ်တစ်ဝန်း ရေးသားဂုဏ်ပြုကြတယ်။
အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုအဲ့ဒီလေယာဉ်မှာပါတဲ့ခရီးသည်တွေတောင်မသိလိုက်ဘူးတဲ့ အဲ့ဒီလေယာဉ်မှာပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံက သစ်ကုန်သည် ဒေါ်ခင်ဝင်းဆိုသူဟာ အံသြပြီး အမေရိကန်ကို အဲ့ဒီနေ့က ထွက်တဲ့ လေ
ယာဉ်ရဲ့ ခရီးစဉ်ကိုလှမ်းစုံစမ်းကြည့်တော့ အဲ့ဒီနေ့ကခရီးသည်တွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးပါပြီး တစ်ဦးက ဒေါ်ခင်ဝင်းဖြစ်ကာ တစ်ခြား တစ်ဦးက တောင်ပုလုဆရာတော်ကြီးပါတဲ့ ။ ဒေါ်ခင်ဝင်းဟာ တောင်ပု
လုဆရာတော်ဘုရားကြီးပုံကို လေယာဉ်မှုးတွေကိုပြတဲ့အခါ လေယာဉ်ဦးခေါင်းပိုင်းမှာ ရပ်ပြီး လေထဲမှာ သင်္ကန်းတလူလူနဲ့လွင့်နေတာ အဲ့ဒီရဟန်းတော်ပါတဲ့။ အဲ့ဒီ လေယာဉ်မှုးတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် အမေရိကန်မှာ တောင်ပုလုတရားစခန်းတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး ခုအချိန်ထိသာသနာပြုနေကြပါတယ်။
Credit: SNM Media
လှနျ​ခဲ့တဲ့ ၃၈ နှဈ​​လောကျ​ကထူးခွားဖွဈ​စဉျ​တခုပါ. . . ဘာသာရေးနှငျ့ဆကျနှယျသော အထှထှေေ ဗဟုသုတ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးမိတ်ထီလာမွို့အနီးရှိ တောငျပုလုတောရရိပျသာတှငျ သီတငျးသုံးနထေိုငျခဲ့သော တောငျပုလုဆရာတျောဘုရားကွီးသညျ တဈခြိနျက ရဟန်တာဟုထငျပျေါကြျောကွားခဲ့သညျ။
ရတနာသုံးပါးကို ယုံကွညျကိုးကှယျလာသူတဈယောကျအကွောငျးအပါအဝငျစာအုပျပေါငျးမြားစှာကိုရေးခဲ့သူစာရေးဆရာဒါရိုကျတာဦးဆနျးလှငျသညျ တောငျပုလုဆရာတျောဘုရားကွီးကိုအကွောငျးပွု၍
ဗုဒ်ဓဘာသာသို့ကူးပွောငျးကာ အရှငျအာဒိစ်စရံသီ ဘှဲ့အမညျဖွငျ့ရဟနျးဝတျပွီး မွနျမာပွညျအနှံတရားမြား လှညျ့လညျဟောခဲ့ပါသညျ။ ပဉျြးမနားမဟာမွိုငျဆရာတျောဦးဇောတိကသညျလညျး ဆရာတျောကွီးကိုအကွောငျးပွု၍ ဘာသာကူးပွောငျးကာရဟနျးဝတျပွီး စာအုပျပေါငျးမြားစှာရေး၍ ကမ်ဘာ့နိုငျငံအသီးသီးကို လှညျ့လညျတရားဟောခဲ့ပါသညျ။
1970 ခုနှဈကြျောဝနျးကငျြလောကျကအမရေိကနျကို ပြံသနျးတဲ့လယောဉျတဈစီးဟာကောငျးကငျယံမှ ပကျြကလြုဆဲဆဲ ဖွဈခဲ့တယျ ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာဘဲ လယောဉျမူးနှဈဦးဟာ လယောဉျဦးခေါငျးရှတေ့ညျ့
တညျ့မှာ သင်ျကနျးဝတျနဲ့ရဟနျးတျောတဈပါးကိုမွငျလိုကျရပွီး လယောဉျပြံဟာ ရုတျတရကျပွနျလညျကောငျးသှားပွီး အမရေိကနျကို ခြောမောစှာပွနျလညျရောကျရှိခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီသတငျးကိုအမရေိကနျသတငျးစာမှာ ဟိုးလေးတဈကြျောဖွဈခဲ့ပွီး မွနျမာရဟနျးတျောတဈပါးက လယောဉျကိုကယျတငျခဲ့ကွောငျးအကယျြတဈဝနျး ရေးသားဂုဏျပွုကွတယျ။
အဲ့ဒီအဖွဈအပကျြကိုအဲ့ဒီလယောဉျမှာပါတဲ့ခရီးသညျတှတေောငျမသိလိုကျဘူးတဲ့ အဲ့ဒီလယောဉျမှာပါတဲ့မွနျမာနိုငျငံက သဈကုနျသညျ ဒျေါခငျဝငျးဆိုသူဟာ အံသွပွီး အမရေိကနျကို အဲ့ဒီနကေ့ ထှကျတဲ့
လယောဉျရဲ့ ခရီးစဉျကိုလှမျးစုံစမျးကွညျ့တော့ အဲ့ဒီနကေ့ခရီးသညျတှမှော မွနျမာနိုငျငံသားနှဈဦးပါပွီး တဈဦးက ဒျေါခငျဝငျးဖွဈကာ တဈခွား တဈဦးက တောငျပုလုဆရာတျောကွီးပါတဲ့ ။ ဒျေါခငျဝငျးဟာ
တောငျပုလုဆရာတျောဘုရားကွီးပုံကို လယောဉျမှုးတှကေိုပွတဲ့အခါ လယောဉျဦးခေါငျးပိုငျးမှာ ရပျပွီး လထေဲမှာ သင်ျကနျးတလူလူနဲ့လှငျ့နတော အဲ့ဒီရဟနျးတျောပါတဲ့။ အဲ့ဒီ လယောဉျမှုးတှရေဲ့ကြေးဇူးကွောငျ့ အမရေိကနျမှာ တောငျပုလုတရားစခနျးတဈခု ဖှငျ့လှဈပေးပွီး ခုအခြိနျထိသာသနာပွုနကွေပါတယျ။